Lincoln Literacy : မြန်မာဘာသာ
Coronavirus နှင့် COVID-19 ကိုနားလည်ခြင်း
အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည်လင်ကွန်းစာတတ်မြောက်ခြင်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်မဟုတ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောရင်းမြစ်များမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များဖြစ်ပြီးသင်ခန်းစာတွင်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေသည်။
၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်သေးငယ်သောပိုးမွှားလေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ (အောက်ဖော်ပြပါပုံများကိုကြည့်ပါ။ ) ၎င်းသည်လူ့ဆံပင်ထက်အဆ ၅၀၀၀၀ ခန့်သေးငယ်သည်။ Coronavirus သည်လူကိုအသက်ရှူသောအခါရောဂါပိုးကူးစက်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့တက်ခြင်း။ ဆူးများသည်အဆုတ်ဆဲလ်ကိုထိုးဖောက်ပြီးဆဲလ်ကိုဗိုင်းရပ်စ်ကူးစေရန်အတင်းဖိအားပေးသည်။ ထိုလူသည်ချောင်းဆိုးခြင်းသို့မဟုတ်နှာချေခြင်းဖြစ်သည့်အခါဗိုင်းရပ်စ်များစွာကူးစက်သွားသည်။ သူတို့ကလေထဲကိုမျောနေပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကိုကူးစက်ဖို့သူရဲ့လက်ကိုစီးကြတယ်။
ဒီရောဂါနှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်နေဆဲဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။ WHO ၏အဆိုအရ၎င်းသည်လူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားသည်။ လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ခန္ဓာထဲသို့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်သည့်အခါရောဂါလက္ခဏာများမပေါ်ပေါက်မီ ၂ ရက်မှ ၁၄ ရက်အကြားကာလရှိသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ အချို့သူများအတွက်ရောဂါလက္ခဏာများမရှိပါ။ အချို့အတွက်မူအအေးနှင့်တူသည်။ ထိုသူတွင်ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာချေခြင်း၊ ဖျားခြင်းသို့မဟုတ်အစာအိမ်နာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ (အောက်ခြေရှိပိုစတာများနှင့်ဂရပ်ဖစ်များကိုကြည့်ပါ။ ) အချို့အတွက်၎င်းသည်တုပ်ကွေးကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အချို့သူများအတွက်သေစေနိုင်သည်။ သေဆုံးမှုနှုန်းသည်အသက် ၈၀ ကျော်သူများနှင့်ရောဂါမကူးမီအဆုတ်ပြhadနာရှိသူများအတွက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
သင့်ဘဝကိုယခုခြိမ်းခြောက်နေသောအခြေအနေမျိုးတွင်မရှိလျှင်၊ အိမ်တွင် နေ၍၊ အခြားလူများနှင့်ဝေးကွာသွားပြီးသင့်ဆရာဝန်ကိုဖုန်းဆက်ပါ။ သင့်တွင်ပုံမှန်ဆရာဝန်မရှိပါကသို့မဟုတ်ဘာသာစကားနှင့်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျန်းမာရေးဌာနကို 402-441-8006 သို့ခေါ်ဆိုပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အရေးတကြီးကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ လင်ကွန်းစာတတ်မြောက်မှုရှိသူတစ် ဦး ဦး ကသင့်အားအနက်ဖွင့်စကားပြောဆိုခြင်းဖြင့်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်ဟုသင်ထင်လျှင် 402-310-0572 သို့မဟုတ် 402-475-3774 သို့စာပို့ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးသင်စာရေးသည့်အခါသင့်နာမည်ပေးပါ ကျွန်ုပ်တို့ကူညီဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါ။
အခမဲ့ MyLNK အက်ပ်ကိုသင့်ဖုန်းပေါ်တွင်ကူးယူပါ။ ၎င်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများရှိသည်။ အကယ်၍ သင်မလုပ်နိုင်လျှင်၊ အချို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။ info@lincolnliteracy.org တွင်အီးမေးလ်ဖြင့်လည်းမေးခွန်းများမေးနိုင်ပါသည်။
CDC မှအတည်ပြုချက်အရအာရှသားများသည်အခြားလူများထက်ရောဂါကူးစက်ရန်သို့မဟုတ်ပျံ့နှံ့ရန်မဖြစ်နိုင်ချေ။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားမှုရောဂါစတင်ခဲ့သော်လည်းဥရောပနှင့်ကမ္ဘာ့အခြားဒေသများတွင်ပိုမိုလျှင်မြန်စွာပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်လူ ဦး ရေတစ်သန်းလျှင်တစ် ဦး ထက်နည်းသောအတည်ပြုချက်မှာ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အခြားနေရာများတွင်မူရှားပါးနေဆဲဖြစ်သည်။ ကူးစက်မှု၏အန္တရာယ်သည်မည်သည့်နေရာမှဖြစ်စေ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိသူသို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိနေသူတစ် ဦး ဦး ၏မျက်နှာပြင်ကိုထိခြင်းအားဖြင့်အနီးကပ်ဆက်သွယ်ခြင်းမှလာသည်။
ကာကွယ်ခြင်းကအကောင်းဆုံးကုသမှုပဲ။ ဒါကရောဂါအသစ်တစ်ခုပါ။ COVID-19 ဟူသောအမည်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ သက်သေပြနိုင်သောသို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်သောကာကွယ်ဆေးမရှိပါ။ ရောဂါကုသရန်ကျယ်ပြန့်သောရရှိနိုင်ဆေးဝါးမရှိပါ။ "coronavirus ဆေး" သို့မဟုတ်ကာကွယ်ဆေးမဝယ်ပါနှင့်။ သူတို့အတုတွေ သူတို့ကမကူညီဘူး၊
> နေမကောင်းဖြစ်နေစဉ်အိမ်တွင် နေ၍ အခြားသူများနှင့်အဆက်အသွယ်များကိုတတ်နိုင်သမျှကန့်သတ်ပါ။
> သင်ချောင်းဆိုးသို့မဟုတ်နှာချေလျှင်ဖြစ်နိုင်လျှင်သင်၏ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းကိုတစ်သျှူးဖြင့်ဖုံးအုပ်ပါ။ ထို့နောက်တစ်သျှူးများကိုအမှိုက်ပုံးထဲပစ်ချပါ။
> တစ်သျှူးကို အသုံးပြု၍ မရပါကသင်၏ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းကိုလက်၏တံတောင်ဆစ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ပါ။
> သင်၏မျက်လုံးများ၊ နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်တို့ကိုမထိပါနှင့်။
> သင်၏လက်များကိုမကြာခဏဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့်အနည်းဆုံး ၂၀ စက္ကန့်ကြာအောင်ဆေးကြောပါ။
> ဆပ်ပြာနှင့်ရေမရရှိပါကအရက်အခြေပြုလက်ဖြင့်ပွတ်ပေးပါ။ ၎င်းသည်အနည်းဆုံးအရက် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိရမည်
ထို့အပြင်အချို့သောအာဏာပိုင်များကကျွန်ုပ်တို့သည်ကူးစက်ရောဂါပျံ့နှံ့ခြင်းမှကာကွယ်ရန်လက်အားမဖြတ်ဘဲနေရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ လက်ဆွဲခြင်းသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကိုတိုးပွားစေနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစားထိုးဖော်ရွေလှိုင်းကိုအကြံပြုသည်။ အခြားသူများအားမထိခိုက်စေဘဲလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုရပ်တန့ ်၍ မရပါကမကြာမီတွင်သင်၏လက်ကိုဆေးကြောပါ။ သင်မပြုလုပ်နိုင်ပါကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်လက်သန့်ရှင်းရေးဆေးကိုသုံးပါ။
အဘယ်ကြောင့်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံးကို ၀ တ်ဆင်ထားခြင်းစာရင်းတွင်မတွေ့ရသနည်း။
သာမန်မျက်နှာဖုံးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆုတ်ထဲသို့ဗိုင်းရပ်စ်များဝင်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးရာတွင်ထိရောက်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကအရမ်းသေးလို့ပေါ့။ သာမန်မျက်နှာဖုံးကိုသုံးခြင်းသည်တင်းနစ်ကြိုးတပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကွင်းဆက်ချိတ်ထားသည့်ခြံစည်းရိုးတစ်ခုဖြင့်ခြင်ကိုတားရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်တူနိုင်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်အတန်းမျက်နှာဖုံးများသည်ထိရောက်မှုရှိရန်လေ့ကျင့်မှုလိုအပ်သည်။ ရောဂါကူးစက်ခံရသည့်လူနာများကုသရန်ကျန်းမာရေး ၀ န်ထမ်းများသို့မဟုတ်အချို့ကိစ္စများတွင်အိမ်စောင့်ရှောက်မှုပေးသူများအတွက်သီးသန့်ထားသင့်သည်။ ဆေးကုသပေးသူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
နောင်တရလျက်လင်ကွန်းစာတတ်မြောက်ရေးအတန်းများ၊ ပွဲများနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအကန့်အသတ်မရှိရပ်ဆိုင်းမည်ဟုကြေငြာသည်။ ဒါဟာပြီးခဲ့သည့်လများဖွယ်ရှိသည်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်လင်ကွန်းပြည်သူ့ကျောင်းများ၏ COVID-19 ကူးစက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ သတိပေးမှုများစွာတွင် LPS သည်နောက်ထပ်အသိပေးခြင်းမတိုင်မီကလူကိုယ်တိုင်အတန်းများပြုလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းကြေငြာချက်အရသိရသည်။ ဒါပေမယ့်လူတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာအတူတကွစုစည်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်။ သင်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ info@lincolnliteracy.org သို့အီးမေးလ်ပို့။ (သို့) ၄၀၂-၃၁၀-၀၅၇၂ သို့ကျွန်ုပ်တို့စာပို့နိုင်သည်။
အများပြည်သူပိုင်ကျောင်းများပိတ်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒသည်ကာလကြာရှည်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်မိဘများသည်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်များတွင်သူတို့၏ကလေးများနှင့်အတူရှိနေရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုပိတ်သိမ်းခြင်းကအဓိပ္ပာယ်ရှိသောနောက်ထပ်အကြောင်းရင်းများရှိသည်။ ယနေ့ခေတ် Nebraska တွင် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုအနည်းငယ်သာသိသော်လည်းဤ coronavirus သည်အလွန်လျှင်မြန်စွာပျံ့နှံ့နိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အီတလီသည်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၂၀ မှသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသို့တစ်ပတ်ကျော်အကြာတွင်သွားခဲ့ပြီးသူတို့၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်မှာလွန်စွာကျဆင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ယခုပင်ပညာသတိရှိရှိပြုမူပြီးယူအက်စ်တွင်ပျံ့နှံ့မှုကိုနှေးကွေးစေနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးကုသမှုပေးသူများသည်လူနာတစ် ဦး ချင်းစီအားသူသို့မဟုတ်သူမလိုအပ်သည့်ဂရုပြုမှုကိုသူတို့ဖျားနာစေနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ဆက်သွားလိုပါက LL အတန်းများသင်ကြားသောကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ပိတ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ဝေးဝေးနေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး၊ ကျူရှင်ဆရာအချို့ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသောကြောင့်ယခုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကံမကောင်းစွာပြောရန်စောလွန်းသေးသည် LPS ကဘာလုပ်မည်ဆိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သော့ချက်မေးခွန်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည့်တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းမဟုတ်ပါ။ ဤအတောအတွင်းလင်ကွန်းစာတတ်မြောက်ရေးအကြီးတန်း ၀ န်ထမ်းများက LPS၊ City Health Department, CDC နှင့် WHO အပါအ ၀ င်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များကိုစောင့်ကြည့်နေကြသည်။ ဤစာမျက်နှာကိုအနည်းဆုံးတစ်ပတ်လျှင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တင်ပြပါမည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခု မှစ၍ အများပြည်သူနှင့်နီးကပ်စွာဆက်ဆံပါမည်။ ၀ န်ထမ်းများကို၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များမရှိလျှင်အိမ်တွင်နေရန်တောင်းဆိုသည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အီးမေးလ်မှတဆင့်အချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အထွေထွေအီးမေးလ်မှာ info@lincolnliteracy.orgဖြစ်သည်။
ပြင်ပသတင်းအချက်အလက်လင့်ခ်များ (ချိတ်ဆက်မှုကထောက်ခံချက်ကိုမဖော်ပြပါ) -
သတင်းအချက်အလက် (CDC) ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးစင်တာများမှ CDV မှ) မှ
သတင်းအချက်အလက်များကိုအခြားဘာသာစကားများဖြင့် (စပိန်၊ ရုရှား၊ ဖာစီသတင်းအချက်အလက်များ , အာရဗစ်, ဗီယက်နမ်နှင့်အခြား)
Nebraska ရှိ COVID-19 နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်။နှင့်ပတ်သက်သည့်ကျန်းမာရေးနှင့်လူသားဝန်ဆောင်မှုများ
Lincoln City မှ COVID-19ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
နောက်ဆုံးပေါ်ကမ္ဘာ့အခြေအနေ - Johns Hopkins University မှ Global Dashboard
Mythbusters မှ - WHO သည်ကောလဟာလများကိုအနားယူ
Univစေသည်။ Nebraska Medical Center ၏ Coronavirus မွမ်းမံမှုများ
Univ ။ မင်နီဆိုတာရဲ့ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာသုတေသနဌာနနှင့်မူဝါဒ
ကလေးများအတွက်- ကလေးများအတွက် Coronavirus အသစ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာတဲ့ရုပ်ပြယ့်ရုပ်ပြ
ငါ့မျက်နှာကိုမထိရဲရင်လား? Coronavirus ကိုကာကွယ်ဖို့အလွယ်ဆုံးနည်းကဘာကြောင့်အရမ်းခက်ရတာလဲ။
ဗီဒီယို - Dr. Bob Rauner ၏ဒေသခံဆေးဘက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်နှင့်အကြံဥာဏ်။
သင့်တွင်ဆဲလ်ဖုန်းရှိပါက MyLNK ဟုခေါ်သည့်အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းကိုကူးယူရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ၎င်းတွင်လူ့န်ဆောင်မှုများအကြောင်းလတ်ဆတ်သောသတင်းအချက်အလက်များရှိသည်။ ၎င်းကိုစပိန်၊ အာရဗီနှင့်ဗီယက်နမ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အစားအစာဖြန့်ဝေခြင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင် Coronavirus တုံ့ပြန်မှုအတွက်အမျိုးအစားရှိသည်။
မှတ်ချက်။ ။ သင်၌ ServicePoint ကဒ်ရှိပါက၎င်းကိုယူသွားပါ။ မရှိပါကသင်၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သို့မဟုတ်အခြား ID ကိုယူပါ။
လိုအပ်နေသူများအတွက်စင်တာ (၃၉၁၁)၊ ၂၇ လမ်းကကားဖြင့်အစာဖြန့်ဖြူးပေးနေသည်။ သင်သည်ထိုနေရာတွင်မောင်း။ သင်၏ကားထဲတွင်နေရန်လိုအပ်သည်။ သင်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သွားနိုင်သည်။ အစားအစာဖြန့်ဝေရန်အချိန်သည်တနင်္လာနေ့မှသောကြာအထိနံနက် ၁၀ နာရီမှညနေ ၁ နာရီအထိဖြစ်ပြီးအင်္ဂါနေ့ ၄ မှညနေ ၆ နာရီအထိ
သင့်တွင်ကလေးများရှိပါက လင်ကွန်းအစိုးရကျောင်းများသည်နံနက် ၁၁ နာရီမှည ၁၂ နာရီ ၃၀ အထိအင်္ဂါနေ့တွင်အစားအစာများကိုပေးသည်။
Belmont မူလတန်းကျောင်း - တံခါး ၈ (၃၄၂၅ မြောက် ၁၄ လမ်း)
အာနိုးမူလတန်းကျောင်း - တံခါး ၁၀ (၅၀၀၀ Mike Scholl Street)
Hartley မူလတန်းကျောင်း - တံခါး ၈ (၇၃၀ မြောက် ၃၃ လမ်း)
Calvert မူလတန်းကျောင်း - တံခါး ၇ (၃၇၀၉ အက်စ် ၄၆ ခုစိန့်)
ကလင်တန်မူလတန်း - တံခါး ၃ (၁၅၂၀ N. ၂၉ စိန့်)
ပန်းခြံအလယ်တန်းကျောင်း - တံခါး ၅ (၈၅၅ တောင် ၈ လမ်း)
အရှေ့မြောက်ဘက်အထက်တန်းကျောင်း - တံခါး ၃၅ (၂၆၃၅ မြောက်၊ ၆၃ လမ်း)
လင်ကွန်းအထက်တန်းကျောင်း - တံခါး ၄၄ (၂၂၂၉ J လမ်း)
ဒါ့အပြင်ကက်သလစ်လူမှု ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ၂၂၄၁ အိုစိန့်၊
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - https://www.cssisus.org/what_we_do/programs_services/programs_services.html
Allo သည်ဤအရေးပေါ်အခြေအနေတွင်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက 402-480-6550 ကိုခေါ်ပါ။
သမ္မတ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်လင်ကွန်းမြို့တော်ဝန်တို့သည်အရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လျှင်မြန်စွာပျံ့နှံ့နေသည်။
coronavirus ပြန့်ပွားမှုနှေးကွေးစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်လူမှုရေးအရဝေးကွာခြင်းကိုကျင့်သုံးရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာအိမ်တွင်တတ်နိုင်သမျှနေထိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ လိုအပ်သောဈေးဝယ်ထွက်ရန်သို့မဟုတ်လေကောင်းလေသန့်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်ထွက်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားလူများနှင့်အနည်းဆုံး ၆ ပေအကွာတွင်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားလူများတို့ထိမိသောတံခါးလက်ကိုင်ခလုတ်များ၊ ပစ္စည်းများကိုထိသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရနိုင်သည်။ ထိုစွန့်စားမှုသေးငယ်စေရန်သင်၏လက်ကိုမကြာခဏလက်ဆေးသန့်ရှင်းဆေးသို့မဟုတ်သာမန်ဆပ်ပြာဖြင့်ဆေးကြောရန်အရေးကြီးသည်။ လက်ဆေးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏လက်ကိုဆပ်ပြာဖြင့်အနည်းဆုံး ၂၀ စက္ကန့်လောက်ဆေးကြောပါကပုံမှန်ဆပ်ပြာနှင့်ရေသည်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ အင်္ဂလိပ်စာဖြင့်ရေတွက်ခြင်းကိုလေ့ကျင့်ပါ။ တစ်၊ နှစ်၊ သုံး၊ အသက် ၂၀ အထိ
။ အိမ်မှာ၊ တစ်ယောက်တည်းဒါမှမဟုတ်သင့်မိသားစုနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်းသည်ခက်ခဲသည်။
စိတ်ရှုပ်ဖို့လွယ်တယ်၊ သူတစ်ပါးရဲ့အမှားလို့ထင်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်သတိရပါ၊ လူတိုင်းကစိတ်ပျက်ကြပြီးအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီခက်ခဲတဲ့အချိန်ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါပဲ။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ယောက်တည်းနေမည်ဆိုလျှင်သင့်ဖုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အခြားသူများထံဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏လင်ကွန်းစာတတ်မြောက်မှုနည်းပြဆရာနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ အွန်လိုင်းလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ပါ။
သတိရ: အရာအားလုံးပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဘေးဒဏ်နှင့်ကပ်ရောဂါများစွာခံစားခဲ့ရသည်။ ဒီတစ်ခုကအဆိုးဆုံးမဟုတ်ပါဘူး ငါတို့အများစုဟာရှင်သန်ကြလိမ့်မယ်၊ ၎င်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းမဖြစ်နိူင်သော်လည်းလက်ရှိအခြေအနေများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပါလိမ့်မည်။
■အိမ်မှုကိစ္စများတွင်ကလေးများပါ ၀ င်မှုကိုအားပေးပါ၊
■စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရန်အပန်းဖြေနည်းစနစ်များတွင်ပါ ၀ င်ပါ။
နှင့် Lincoln စာတတ်မြောက်ရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးဂျနီဖာ Conway ထံမှအပန်းဖြေနည်းစနစ်အတွက်အကြံပြုချက်မှာ -
၅-၅-၅ ဟုခေါ်သည်။ သင်၏နှာခေါင်းမှတဆင့် ၅ စက္ကန့်အတွင်းရှူရှိုက်ပါ၊ ၅ မှတ်ကိုကိုင်ထားပါ၊ သင်၏ပါးစပ်ထဲမှငါးလုံးရေတွက်ပါ။
(ရင်းမြစ် - ကလေးသူငယ်ငါးယောက်မှယောဂကျင့်သုံးခြင်း)
အသံနှင့်သဘာဝဝဘ်ဆိုက်အချို့အတွက်ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ - https://youtu.be/8vwV_0_M0IQ သို့မဟုတ်ဤတွင် - https://rowe.audubon.org/birds/crane-cam
၎င်းသည် Crane Cam ဖြစ်သည်။ Nebraska အလယ်ပိုင်းရှိ Sandhills ရိန်း၏ရုပ်ပုံများကိုပြသသည်။
သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုရွေ့လျားခြင်းသည်သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်တို့အတွက်ကောင်းမွန်သည်။ ဒါဟာစိတ်ကျရောဂါရုတ်သိမ်းပေးရန်ကူညီနိုင်သည်။ ရာသီဥတုကောင်းရင်ပြင်ပလမ်းလျှောက်ထွက်ပါ။ အခြားလူများနှင့်သင်၏အကွာအဝေးကိုအနည်းဆုံးခြောက်ပေခန့် ထား၍ သင်ကိုယ်တိုင်ပျော်မွေ့ပါ။
အိမ်တွင်၊ သင်တို့ရှိသမျှသည်အထူးကိရိယာများမပါဘဲလေ့ကျင့်ခန်းကိုရနိုင်သည်။ ရေဖြည့်ထားသောပလပ်စတစ်ပုလင်းကြီးသည်အလေးချိန်ရှိနိုင်သည်။ သင်တွန်းအားပေးနိုင်သည်။ သငျသညျ ups ထိုင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ခြေချောင်းကွေးနှင့်ထိတွေ့နိုင်ပါတယ်။ သင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းသင့်ဖုန်းတွင်တေးဂီတကိုဖွင့်ပါ။
ဤအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းအခမဲ့ online လေ့ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးသဖြင့်၎င်းကိုထောက်ခံခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် - https://www.youtube.com/user/blogilates
နှင့်ဆက်သွယ်ပါဤကျဆုံးသောအရေးပေါ်အခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျူရှင်ဆရာများနှင့် ၀ န်ထမ်းများသည်သင့်နှင့်အဆက်အသွယ်ရလိုကြသည်။ နည်းလမ်းအချို့ရှိပါသည်။
WhatsApp - ဤအခမဲ့အက်ပ်သည်စာရိုက်ခြင်း၊ စကားပြောဆိုခြင်းနှင့်နှစ်လမ်းသွားဗီဒီယိုများကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်စေသည်။ ၎င်းသည်အင်တာနက်ကိုဝိုင်ဖိုင်ဖြင့်ဆက်သွယ်သည်။ ၎င်းကိုသင် Android Google Play စတိုးသို့မဟုတ် iPhone App Store မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ သင်၏အထိန်းသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများကိုသူတို့၏အမည်များသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်များဖြင့်ရှာနိုင်သည်။
ချဲ့ခြင်း - ဤသည်ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ လူ ၁၀၀ အထိ Zoom မှတဆင့်အွန်လိုင်းတွင်တွေ့ဆုံနိုင်သည်။ အခမဲ့အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုမိနစ် ၄၀ အထိခွင့်ပြုသော်လည်း၊ ဤအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းသူတို့သည်တိုးချဲ့နိုင်သည်။
Google Meet - ၎င်းသည်ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဝန်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်သည်။ လင်ကွန်းစာတတ်မြောက်မှုအတွက်အကောင့်တစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးများအားအတန်းများသို့မဟုတ်လူမှုရေးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ တောင်းဆိုမှုကိုသာပို့ပေးပါ။
Facetime - Apple သုံးစွဲသူများအတွက်ဤအွန်လိုင်းကွန်ဖရင့်ကိရိယာသည်အသုံးဝင်သည်။ အနည်းဆုံးလင်ကွန်းစာတတ်မြောက်ရေးသင်တန်းတစ်ခုသည်ဤနည်းဖြင့်တွေ့ဆုံနေသည်။
မေးခွန်းများ? အခြားအကြံပြုချက်များ။တွင်အီးမေးလ်ပို့ပါ info@lincolnliteracy.orgကျွန်ုပ်တို့သည်
လင်ကွန်းစာတတ်မြောက်ရေးအွန်လိုင်းအတန်းများ၊ စကားပြောဆိုမှုအုပ်စုများနှင့်အစည်းအဝေးများကိုတတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်စီစဉ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ အသစ်သောအရာများကြည့်ရှုရန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြန်စစ်ဆေးပါ
ထိုအချိန်အတောအတွင်း၊။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်သူ Summayia Khan သည်သူမ၏အတန်းထဲတွင်သင်ယူနေသူများအတွက် YouTube ဗီဒီယိုတိုအချို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူမကသူတို့ကိုမင်းနဲ့မျှဝေရတာဝမ်းသာတယ်။ မှာသူတို့ကိုထုတ်စစ်ဆေး:
နောက်ထပ်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကျောင်းဆရာ Shariful McCright, ထိုတုပ်ကွေးရောဂါအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းမရရှိနိုင်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုလုပ်နေပါတယ်အချို့အွန်လိုင်းပညာရေးက်ဘ်ဆိုက်များကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်:
သူတို့က အခုအချိန်မှာအခမဲ့အခြေခံသုံးစွဲခွင့်ပေးနေသည်။ ဆရာကကျောင်းသားတွေကိုထည့်ပေးပြီးသူတို့ကိုပေါင်းထည့်ဖို့ကုဒ်တစ်ခုပေးသည်။ ဆရာများသည်တာဝန်များကိုပေးပြီးတိုးတက်မှုကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်ခန်းစာများသည်အသံထွက်ကျွမ်းကျင်မှု၊ စာဖတ်ခြင်း၊ စာရေးခြင်းနှင့်သင်္ချာကိုအာရုံစိုက်သည်။
ထောင်နှင့်ချီသောအခမဲ့စာအုပ်များသည်ကျောင်းသားများအွန်လိုင်းဖတ်ရန်သို့မဟုတ်နားထောင်ရန်အတွက်။ ဗီဒီယိုများနှင့်ဆောင်းပါးများသည်အကြောင်းအရာများစွာတွင်ပါဝင်သည်။ ထို့နောက်ဆရာသည်ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်သည်၊ ထို့နောက်ကုဒ်တစ်ခုကိုဝေမျှပြီးကျောင်းသားများကိုစာသင်ခန်းစာရင်းထဲတွင်ထည့်နိုင်သည်။
Free ဆရာသည်ကျောင်းသားများကိုသူ / သူမ၏အတန်းသို့ထပ်ဆင့်။ ကျောင်းသားများအားတာ ၀ န်ပေးမှုများရှိသည်။ ကျောင်းသားများသည်ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ဆရာနှင့်မျှဝေခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အခမဲ့ Live ဂီတနှင့်လုပ်ရပ်များ! “ Word Off” သီချင်းနှင့်ဝေါဟာရလှုပ်ရှားမှုစသည့်လုပ်ဆောင်ရန်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။